Dhakhaatiirta GP-gu Dhawaan Si Ay Ugu Qoraan Xashiishadda Daawada Tasmania • Drugs Inc.eu
Dhakhaatiirta GP-gu waxay dhawaan kuu qori doonaan xashiishadda dawada ee Tasmania
Tasmanians-ku waxay dhawaan u tagi doonaan GP-ga si ay xashiishadda dawada ah u helaan. Waxaa la sheegay in doorashadan ay heli doonaan bukaanada laga bilaabo 1-da Luuliyo. Weli, dhakhaatiirtu waxay rumeysan yihiin inay waqti dheer ku qaadan karto in xashiishka la heli karo.
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay ku qaadan karto ilaa 12 bilood GP-yada inay u qoraan daawada. Farmashiyayaashu waxay ka walaacsan yihiin kharashka sharci ahaan loo qoro daawo cannabis. Tasmania waa awooda kaliya ee ka jirta Australia hada GP-yada looma ogola inay marijuana caafimaad u qoraan bukaanada.
Bukaanku waxay kaliya si sharci ah uga heli karaan daawada dhakhtarka takhasuska leh, sida dhakhtarka neerfaha. Laga soo bilaabo Sebtembar 2017 illaa Ogosto 2020, kaliya 16 Tasmaniaanka ayaa sharci ahaan loogu qoray xashiishad iyada oo loo marayo Qorshaha Helitaanka La Xakameeyay gobolka.
Taageerayaasha iyo siyaasiyiinta, oo ay ku jiraan Tasmanian MLC Ivan Dean iyo Senatarada Shaqaalaha Tasmania Anne Urquhart iyo Catryna Bilyk waxay muddo dheer ku baaqayeen in la hagaajiyo qorshaha xashiishadda caafimaad ee Tasmaniya.
Akhri wax dheeraad ah abc.net.au (Source, EN)
Maxay yihiin faa'iidooyinka laga helo soosaarayaasha xashiishka buuxa?
Waxaa jira iskudhafyo badan oo ah cannabinoids, terpenes iyo waxyaabo kale oo yar oo caan ah oo hubin kara ...
Tilray waxay haysataa shahaadada GMP oo dheeraad ah ee dhoofinta xashiishadda caalamiga ah
Ruqsadaha cusub ee laga helay Tilray, awoodda wax dhoofinta caalamiga ah ee shirkadda waxaa lagu ballaarin karaa ...
Sideen ku doortaa isku-darka ugu wanaagsan ee CBD? Iyadoo 6 nooc oo terpenes ah la sharaxay.
Wax soo saarka CBD ayaa la wareegay suuqa dadkuna waxay ogaanayaan faa'iidooyinkooda badan, laakiin maaha ...
Daawooyinka dariiqa ku sumooba benzos waxay keenaan dhimasho badan
Ku biirista shirkadda Tilray Inc. iyo Aphria Inc. soo koobay: shirkada xashiishka ugu weyn aduunka dakhli ahaan
Markii ugu horeysay ee xawaaraha Tiknoolajiyadda Caafimaadka Yurub ee Malta
Waa sidee dakhliga xashiishadda sida Kanada?
CBD waxay xannibaysaa khalkhalka iyo welwelka ka imaan kara marijuana THC